KCRW Waxay Dhiseysaa Idaacadda Farshaxanka cusub ee Idaacadda iyo Xarunteeda Warbaahinta | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Wararka Injineerka Warbaahinta
Bogga ugu weyn » content abuurkii » Audio » KCRW Waxay Dhiseysaa Idaacada Raadiyo-Cusub ee Fanka iyo Xarunta Warbaahinta
KCRW Waxay Dhiseysaa Idaacada Raadiyo-Cusub ee Fanka iyo Xarunta Warbaahinta
KCRW dhawaan laga soo degay salka dhismaha ee ku yaal xerada weyn ee Santa Monica College, loona wareejiyo xarun cusub oo casri ah $ 38-milyan oo xarunteedu tahay Xarunta Santa Monica ee Xarunta cusub ee Saxaafadda iyo Naqshadeynta. Xaruntan cusub ayaa ah soo afjarida sanadihii 11 ee lacag aruurinta, naqshadeynta, rakibidda, isku-darka, iyo tababarka shaqaalaha KCRW iyo la-hawlgalayaasha ku hawlan mashruuca. Wadnaha qaabeynta wuxuu ahaa $ 6 milyan oo doollar oo la casriyey raadiyaha iyo kaabayaasha baahinta ee la dhisay si loo kordhiyo wadashaqeynta loona siiyo shaqaalaha qalabka lagama maarmaanka u ah inay saldhigooda soo geliyaan da'da dijitaalka ah.
Xaruntu waxaa ka mid ahaa sagx dabaq oo bir ah, oo aan lagu darin saqafka sare, qolka mashiinka 1, seddex IDF oo taageeraya, iyo ku dhawaad ​​istuudiyaha 20 iyo meelaha waraysiga, ” uga hadashay Steve Herbert, Injineerka Madaxa Warbaahinta.
Wadnaha mashruuca, wuxuu ahaa VP of Technology at Warbaahinta Muhiimka ah, Edward Locke. Ed iyo kooxdiisa injineeriyada waxay u qaabeeyeen dhamaan qalabka maqalka iyo qalabka warbaahinta oo lagama maarmaan u ah inay qanciyaan baaxadda mashruucan. Qalab-maqal kasto, makarafoon, satellite gudbiyaha, qolka kontaroolada, server-ka, iyo istuudiyaha ayaa loo baahan yahay in si taxaddar leh looga fikiro, iyadoo la hubinayo in kaabayaal ku filan laga heli karo qol walba, in nidaamyada oo dhami ay is-waafaqaan, oo fiilo walba la qeexay.
“Tani waxay ahayd mashruuc aad u weyn oo ku lug yeeshay qalab isku-dhaf ah oo aqoon qoto dheer u leh baahin badan oo kala duwan oo baahin ah, soo-saarid ah, idaacado, iyo teknolojiyadda maqalka. Key Code-ka Muhiimka ah wuxuu u taagnaa loolanka, ” ayuu yidhi Ed Locke.
Sawirka mid ka mid ah sagxadda dabaq ee gudaha xarunta idaacadda cusub ee KCRW. Dabaqaani kaligiis wuxuu leeyahay 10 hawada, wareysiga, iyo goobo wax soo saar oo loo isticmaalo heesaha iyo wararka.
QARAXA RAASHINKA, DUKAANKA IYO DHAQANKA - MASHRUU SANO 11 SANO
Naqshadeynta farsamo ee bilowga ah ee raadiyowga cusub ee KCRW ayaa ka bilaabatay 2012, iyadoo Key Code Media uu ku guuleystey mashruuca is-dhexgalka ee $ 6 milyan ee 2014. Si kastaba ha noqotee, ma ahayn illaa dabayaaqadii-2017 in fiilada bilowga ah iyo rakibidda qalabka warfaafinta iyo qalabka maqalka maqalka la bilaabay. Marka, maxaa qaatay muddo dheer?
Xarunta KCRW waxay joogtay xaruntoodii hore in kabadan 35-sano ayay ahayd waqtigii guurista. Qandaraaslayaasha guud, naqshadeeyeyaasha, koronto-yaqaannada, iyo kuwa ku shaqeeya nidaamka ayaa ka wada shaqeynayay si loo hubiyo in qayb kasta oo halxiraalaha ah loo habeeyay si sax ah. Bilowgii howlaha dhismaha, ayaa waxaa soo ifbaxay qodobo muhiim ah oo ugu dambeyntii dhismaha keenay in la joojiyo, oo markii dambe sii waday soo bandhigida caqabado socda oo gaabiyay horumarka.
“Inta lagu gudajiray mashruuca dhismaha, xitaa inta lagu gudajiray muranka qandaraaslaha guud ee Key Code Media Media Ed Edke maalin kasta waa la joogaa, wuxuu qiimeynayay kaabayaasha, sanduuqyada adeegyada warfaafinta, iyo dariiqa korantada si sax ah ayaa loo rakibay. Khalad kasta oo yar oo ay galaan qandaraasleyaasha kale waxay si xun u saameyn ku yeelan karaan shabakadda, naqshadeynta qalabka guryaha, iyo rakibidda qalab waxaa jira waxyaabo badan oo khatar ku jira tallaabo kasta oo mashruucan ah, ”ayuu yiri Steve Herbert.
Caqabad kale ayaa ka timid daahitaanka mashruuca. Tikniyoolajiyada faafinta markii ugu horeysay ee 2014 baaxada ayaa la joojiyay waqtiga amarku bilaabmay 2017. Teknolojiyaddu waxay si deg deg ah u horumarisaa dib u dhac lagu qiyaaso 'sanadaha' waxay abuurtaa caqabado gaar ah.
“60% qalabka ku jira qaabeynta bilowga ah waa in dib loo dejiyaa waqtiga shaqada iyo rakibida. Iyada oo ay ka badan yihiin walxaha khadka khadka '1,200' ee ku lug leh mashruucan qayb kasta oo qalab ah oo liistada ah ayaa loo baahan yahay in lagu caddeeyo qulqulka shaqo ee isku xiran, “Ed Locke waxaa lagu xusay isqabqabsi.
AUDIO OVER IP (AoIP) XIRFADAHA NETWORKED
Mid kasta oo ka mid ah shaqaalaha 85 + KCRW ee ka shaqeeya shaqada iyo qalabka ku habboon ee maqalka ayaa lagu xardhay wadaagista iyo iskaashiga. Dhismuhu wuxuu leeyahay goobo istuudiyaha 25 ah, oo ay ku jiraan 2 On qolalka Kontaroolka Hawada, iskudhaalada qolka wareysiga ee 3, qolalka tooska ah ee maqalka Audio iyo Fiidiyowga, iyo in kabadan qolal wax soo saar ah. Qol kasta waxaa loo rogi karaa boos isku dhufashada, iyadoo la adeegsanayo Audio Over IP (AoIP).
Wariyaasha iyo soosaarayaasha KCRW waxay si dhakhso leh uheli karaan una maareyn karaan mashruuc kasta Pro Pro ama Dalet shebekadda qol kasta oo xarunta kajira. Tani waxay ahayd kala guur weyn.
“Waagii hore, garoonkayaga hawada sare wuxuu ahaa hal qol. Waxaad lahaan lahayd DJ-gaaga oo soo gabagabeynaya muusig muusig ah laakiin ka dib isla markiiba wuu cararay si kooxdayada wararka ay u bilaabaan bandhiggooda hadalka ee 11 am. Qalabkan cusub, qol walba waa istuudiyaha hawada hawada laga baxo kadib dhowr jeer oo guul ah. ”
Waxaa jiray, si kastaba ha ahaatee, dhibaato ayaa jirtay intii lagu gudajirey AoIP-da AVID Qalabka Pro ee ku shaqeeya borotokoolka Mac kuma uusan ku xirnayn isgaarsiinta Axia Livewire AoIP. Iyaga oo ku daraya isku-darnaanta, KCRW ma aysan dooneynin inay ku darto tallaabo beddelaad dhijital ah silsiladdooda maqalka.
Si wax looga qabto welwelkaas, injineeriyada Key Code Media waxay la shaqeeyeen Axia iyo Ravenna si ay u daadgureeyaan qaabeynta caadada ah ee ku xirneyd ProTools oo leh xarumo maqal ah oo labada dhinac ah oo loo yaqaan '32' oo ka badan hal fiilo oo CAT6 ah. Tani kaliya uma suurtogelin KCRW inay soo jiidato dhaxalka ProTools I / O, laakiin waxay sidoo kale ballaarisay oo ay sii xoojisay awoodaha guud ee socodka shaqada.
Gawaarida ROOFTOP - QAADKA xisaabta
Dabcan, kani waa xarun raadiye. Xitaa socodka casriga ah, wariyayaashu waxay wali ku tiirsan yihiin gudbinta maqalka mikrowave-ka-aragtida iyo la hago satellite isgaarsiinta. Saqafka dhismaha cusub, waxaa la keenay shaqaale wiish ah si ay kor ugu qaadaan qalabka gudbinta cirka si ay u waafaqaan goobaha gudbinta iyo satalaytka.
Dhamaan isgaarsiiyayaashu waxay u baahnaayeen inay lahaadaan xarun-barta-barta meelaha ay ka imaanayaan ama meelaha ay tagayaan. Kadib markii xisaabintayadii hore oo dhan la dhammaystiro, waxaan ogaanay in qalabka taageerada saqafka korkiisa lagu rakibay meel laba fiit ka sareysa kuwii hore, ”ayuu yiri Ed.
Kadib daahfurka saqafka sare ee saqafka, kooxda Key Code Media, oo kaashaneysa naqshadeeyaha dhismaha, ayaa si taxaddar leh u soo saaray moodooyinka 3D si ay u sawiraan qalab kasta oo qalab ah. Dhererka ugufiican iyo xaglaha waxaa loo fasiray inay helaan xiriiro xasilan iyadoo laga fogaanayo isku dhacyada jidheed ee qalabka kale ee saqafka ah. Fahmitaanka dabeecadda xasaasiga ah ee qalabkan iyo baahida loo qabo in qalab culus la isuduweyo inta fasallada ay fadhiyeen, ma jirin wax xulasho ah laakiin hel tan saxda ah markii ugu horreysay.
HALKAN KA DHAGEYSO GOBOLKA RADIO
Muxuu qalabka fiidiyowgu ku qabanayaa xarunta raadiyaha KCRW? KCRW waa idaacad dadweyne oo gaar ah- oo bixisa wararka, muusikada, iyo barnaamijyada waxqabadka tooska ah. Morning Become Eclectic wuxuu soo bandhigayaa bandhigyo toos ah oo ay soo bandhigayaan kooxo caan ah oo caan ah iyo kooxo maxalli ah - oo ay ku jiraan farshaxan sida James Blake, Beck, Jungle, Hot Chip, iyo Leon Bridges. Ficil kasta oo muusig ah waxaa lagu sii daayaa kanaalka KCRW YouTube, oo ku faana taageerayaal 303K ah oo cajiib ah.
Idaacadda waa inay muujisaa sida ugu wanaagsan ee loo qabto hawlkasta oo nool, oo ay ku jiraan shaqaale fiidiyoow ah oo cidhiidhi ah. Xalka ugu dambeeya ee 4k-awood leh Sony kaamirooyinka oo lagu rakibay dhamaan istuudiyaha, oo kuxiran qol fiidiyow ah oo ay taageerto Ross Carbonite oo loogu talagay bedelida, Ross Expressions ee sawirada, Ross Ination oo loogu talagalay quudinta warbaahinta bulshada, oo ay taageerayaan Ross Ultrix router router. Dhamaan waxyaabaha fiidiyowga ah ee ka socda goobta waxqabadka waxaa lagu keydiyaa a Solutions Network Solutions Shabakadda kaydinta EVO, halkaasoo lagu tafatiran karo Adobe Premiere Pro ama Final Cut Pro oo ay ka heleen kooxda suuqgeynta ee KCRW.
Goobta istuudiyaha waxqabadka waxaa sidoo kale ku jira gambada iyo laambada dabaqa iyo kuwa ku hadla, kamaradaha PTZ oo la rakibay, iyo balakoon loogu talagalay booqashada taageerayaasha iyo deeq-bixiyeyaasha si ay ugu raaxaystaan ​​bandhigyada nool.
MILIIN DOLLAR AUDIO ROOM
Laf dhabarta dhammaan heesaha muusikada ee MBE waa qolka xakameynta maqalka codka-casriga ah oo ay taageerto Pro Tools, kumbuyuutar SSL C200, racks oo ay ka buuxaan aaladda wax lagu maqlo ee maqalka ah, Adam Audio ku hadla, iyo labadaba MADI iyo qeybinta maqalka Dante. Dhamaan qalabka qolka waxay ku duugeen alaabada guriga si ay qolka uga dhigaan mid xakameyn u ah hay'adda USS.
XIRFADAHA GURYAHA XIRFADAHA UGU SHAQEEYA
Waxaan bannaanka ka joognay xaruntii hore ee dhismaha. Hal inji kasta waxaa loo isticmaalay qolka kontaroolada hawada ama miiska miiska. Ma jirin meel ay ku kulmaan. Meesha cusub, waxaan leenahay qaab miis furan oo leh qolal shir-faneedyo badan oo gobolka-ka-farshaxanka ah. Awoodda aan u leenahay inaan yeelano shirar yar-yar ama dhexdhexaad ah ayaa si weyn kor ugu qaadday awooddeena aan wadashaqayn lahayn, ”ayuu yidhi Steve.
Qol kasta oo shirar ayaa leh qaab shaashad taabasho ah oo shabeel leh oo lagu xardhay Crestron, nidaamyada maqalka, iyo kormeere. Kooxda KCRW waxay leedahay dabacsanaan lagu casuumo wada-hawlgalayaasha inay si toos ah u garaacaan isla markaana ay maqalkooda iyo shaashaddooda ku wadaagaan kulan mug leh. Qol kasta oo shirarku sidoo kale wuxuu ku yaal shabakadda 'Crestron', taasoo u oggolaaneysa qolal badan oo ka tirsan xarunta inay ku xirnaadaan hal kulan oo keliya.
XIRIIRKA AQOONSIGA FARSAMADA KEYD - Ka bilow bilow ilaa FINISH
Kadib lix sano oo nashqadeyn ah (oo lagu daray, dib u qaabaynta), rakibida boqolaal maqal oo muuqaal ah, baahin, iyo wax soo saar maqal ah- waxay ahayd waqtigii la keeni lahaa xubnaha shaqaalaha 120 xafiiska cusub. Shaqaalaha 120 waxay u baahdeen in lagu tababaro qulqulka cusub ee shaqada, softiweer, iyo qalabka, sida Dalet Galaxy iyo ProTools. Tababarkan waxaa sii dheer in ka badan dhowr iyo toban nidaam oo kala duwan oo injineerada KCRW ay ubaahnaayeen inay bartaan.
Key Code Media wuxuu dhowr toddobaad qaatay laamo kala duwan oo KCRW ah oo bixiya tabobar ku-habboon looguna talagalay aaladda qalabka iyo qulqulka shaqada gudaha xarunta cusub.
“Tani waxay ahayd isbedel weyn oo dhanka teknolojiyadda ah oo xaruntayaga ah, mana guuleysan lahayn haddii aan si habboon loo tababarin shaqaalaha qaab kasta oo aalad kasta ku dhex jira. Waxa weyn ee ku saabsan Waxbarshada Furaha Furaha, waa in xitaa kadib maalinta tababarka (yada) goobta, waxaan ognahay inaan qaadan karno taleefanka oo aan si dhaqso leh uga jawaabno su'aalaha waqti kasta. Taasi maahan wax aad ka hesho shirkad soo saare kasta, ”ayuu yiri Steve.
KOOXDA KAALMADA EE KCRW
Santa Monica waxay u timid Warbaahinta Key Code iyadoo ay la socoto caqabad, si ay uga guurto 35 jirkooda qeybta hoose.
Iyada oo qayb ka ah mashruuc $ 11 milyan ah, KCRW, oo ah xaruntii ugu horreysay ee raadiyaha NPR ee Koonfurta California ayaa laga raray sagxadda hoose iyadoo la geeyay dhismeyaal cusub oo la dhisay. Baaxadda mashruuca dhowrka sano waxaa ka mid ahaa naqshad furaha oo buuxa, injineernimada iyo adeegyada is-dhexgalka ee Studio weyn oo wax soo saar leh iyo qolka xakamaynta telefishanka, qolka xakamaynta maqalka, istuudiyo ADR ah, laba qol oo kontoroolka raadiyaha ah, sedex waab oo wax soo saar ah, afar cod oo ka badan waababka, Toddoba Suite wax ka beddel, Labaatan iyo Sideed Fasal, Saddex qol shirar, iyo Boqol Siddeetan kursi Auditorium. Adeegyada isdhexgalka bulshada waxaa ka mid ah fiilooyinka, rakibida, howl gelinta, tababarka iyo heshiiska taageerada socda. Ku rakibida edbinta kala-duwan ayaa waxaa ku jira qalab kala duwan oo ku jira Live, Post, Automation, iyo Audio.
Audio badan IP AVID Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 Caaqilada Cobalt Edward Locke Graham Chapman Prmoted toEditor dhexgalka James Blake KCRW Idaacadda KCRW Warbaahinta Muhiimka ah MStar Soo Dhaweynta Ross SJGolden - SoftAtHome Waran & Fallaaro Steven Herbert kaydinta TVU Networks Video Engineer 2019-10-30
Previous: CTV Vancouver Island wuxuu keenay Sony 'HXC-FB80 HD Studio Cameras On Board
Next: Khibradda Panavision's End-to-End Ecosystem ee 2019 Camerimage